China L-Isoleucine CAS 73-32-5 ho an'ny mpamokatra sy mpamatsy naoty Parma (USP / EP) | Honray
Anaran'ny vokatra ：: L-Isoleucine
L-Isoleucine (Absobaina Iso) dia iray amin'ireo asidra amine 18 iraisana, ary iray amin'ireo asidra amine tena ilaina valo ao amin'ny vatan'olombelona. Izy io dia antsoina hoe asidra amine branched chain (BCAA) miaraka amin'i L-Leucine sy L-Valine miaraka satria izy rehetra dia misy rojom-by methyl ao amin'ny rafitry ny molekiola.
L-Isoleucine dia iray amin'ireo asidra amine tena ilaina izay tsy vitan'ny vatana ary fantatra amin'ny fahafahany manampy fiaretana sy manampy amin'ny fanamboarana sy fanarenana ny hozatra. Ity asidra amine ity dia zava-dehibe amin'ny mpanangana vatana satria manampy amin'ny fampitomboana ny angovo sy manampy amin'ny vatana hiverina amin'ny fiofanana.
Ny vokatry ny L-Isoleucine dia misy ny fanamboarana ny hozatra miaraka amin'ny leucine sy valine, ny fifehezana glucose amin'ny ra, ary ny fanomezana angovo ny vatana. Izy io koa dia manatsara ny fivoahan'ny hormonina mitombo ary manampy amin'ny fandoroana ny tavy visceral. Io tavy io dia ao anaty ny vatana ary tsy azo levonina amin'ny fomba mahomby amin'ny alàlan'ny sakafo sy fanatanjahan-tena fotsiny.
L- Isoleucine dia afaka mampiroborobo ny syntetika proteinina ary manatsara ny haavon'ny hormonina mitombo sy ny insuline, hitazomana ny fifandanjana amin'ny vatana, afaka mampitombo ny hery fiarovan'ny vatana, mitsabo ny aretin-tsaina, hampiroborobo ny fitomboan'ny fahazotoan-komana sy ny anjara asan'ny anti-anemia, fa miaraka amin'ny fampiroboroboana ny tsiranoka insuline. Ampiasaina indrindra amin'ny fitsaboana, indostrian'ny sakafo, miaro ny atiny, ny anjara asan'ny aty amin'ny metabolisma proteinina hozatra dia tena zava-dehibe. Raha tsy ampy dia hisy ny tsy fahombiazana ara-batana, toy ny fanjakana koma. Ny amino glycogenetic sy ketogenika dia azo ampiasaina ho famenon-tsakafo. Ho an'ny fampidirana asidra amine na fanampiana ara-tsakafo am-bava.
Ny loharanon-tsakafo tsara indrindra ho an'ny L-Isoleucine dia ny vary volontany, tsaramaso, hena, voanjo, sakafo soja ary sakafo manontolo. Satria karazana asidra amine tena ilaina izy io, midika izany fa tsy azo foronina amin'ny vatan'olombelona izy io ary amin'ny sakafo ihany no ahazoana azy.
Fanodinana manokana [a] D20
Fanodinana manokana [a] D25
mazava sy tsy misy loko ≤BY6
Metaly mavesatra (Pb)
Asidra amine hafa
fahalotoan'ny isam-batan'olona≤0.5% totalin'ny loto≤2.0%
Ireo akora miabo Ninhydrin-positive
Ajanona amin'ny fandrehitra
Maloto miovaova ara-organika
Previous: L-Threonine CAS 72-19-5 ho an'ny sokajy Pharma (USP)
Manaraka: L-Threonine CAS 72-19-5 ho an'ny kilasy sakafo (FCC / AJI / USP)
L-Threonine Pharm, L-Valine 72-18-4, Farm kilasy L-Leucine, 73-32-5 L-Isoleucine, Sakafo biby, Kilasy Sakafo L-Threonine,